Talooyinka la qaadan karo Spotify
Spotify waa madal music cabsi badan ku abuuray in ay keenaan music oo dhan. Abuuridda cajiib ah Tani waa ka mid ah kooxaha ugu cadcad ee ku caashaqi jiray music raba inay dhagaystaan ​​music meel kasta wakhti kasta . Users heli kartaa helitaanka oo dhan kuwan raadkaygay music dambeeyay oo ay raacaan fanaaniinta ay jecel yihiin. Just saxiixa-in si network Spotify oo aad noqon kartaa qayb ka mid ah adduunka madadaalo this. Users qori karaa si ay u kala duwan oo joogo updated in la sii daayo dambeeyay, wadaagaan ugu cadcad ay, raac saaxiibadood ' playlists iyo abuuro iyaga u gaar ah . Dhagaysiga muusigga waxa uu noqday waayo-aragnimo kala duwan la olole caalami ah oo Spotify. Users hadda heli kartaa helitaanka kuwan raadkaygay ugu dambeeyay si aad u fudud iyo tayada music waa wax cajiib ah.
Maxaa dhacaya haddii aad isticmaali kartaa Spotify isla on qalab kasta? Isticmaalayaasha ayaa mar kasto raadinaa siyaabo si ay u fududayso in ay helaan adeegyada ay isticmaalaan. Sidaas darteed, mid sidan oo kale ay suurtagal tahay waa la qaadi karo Spotify ah. Hadda halkii ay ku rakibidda Spotify ee taxane ah oo qalab aad u isticmaali, waxa ay noqon aad PC, Laptop, iPad, kiniin, Phone, ama wax kasta oo kale oo elektaroonik ah oo aad si fudud u isticmaali kartaa habkaani in ay isticmaalaan Spotify.
Qaybta 1.How si ay u qaadi karo Spotify?
Qaybta 2.Where iyo sida ay u soo bixi qaadi karo Spotify?
Download music Spotify free la TunesGo
1.How si ay u sameeyaan Spotify qaadan karo?
Haddii aad raadineyso inay sameeyaan qaadi karo Spotify, halkan waxaa ku qoran waxyaabo aad neeed doonaa in ay sameeyaan. Inkastoo tallaabooyinka yihiin waqti, waxaad hubsan kartaa in aad heli doonto natiijada saxda ah marka uu dhamaado. Waxa ugu wanaagsan waa in waxa kaliya habka hal mar ah.
1. Ku rakib software portableapp u rogtid oo aad flash drive. Waxa laga heli karaa http://portableapps.com/
2. Codsiga Spotify ee la heli karo Download on https://www.spotify.com/us/download/windows/
3. Ka dib markii la rakibey aad ka heli doonto files soo socda ee buugga
C: \_ User \_\_ AppData \_ barqiyey \_ Spotify
C: \_ User \_\_ AppData \_ Local \_ Spotify
4. Fur buugga iyo dedeg file rakibo oo nuqul ka gal oo ka kooban faylasha
5. fur buugga drive, oo taga si folder portableapp iyo paste folder Spotify ah.
6. nafta ka barnaamijyadooda liiska rakibay oo aad ka heli doono faylka launcher.exe Spotify ee liiska.
Marka aad raacdid talaabooyinkan soo socda waxaad samayn kartaa drive la qaadan karo oo la wadaag saaxiibadaada Spotify, oo ku xidh tirada mid ka mid ah qalabka.
Ku rakib Spotify oo wuxuu ku raaxaysan music, wax walba oo aad jeceshahay, si kasta oo aad jeceshahay ama meel kasta sababtoo ah Spotify waa uun drive USB ah oo ka fog isticmaalka.
Si loo xaliyo dhibaatada ka fiiri xiriir network aad. Waxaad isku dayi karaan in ay ku qasbi joojiyo codsiga oo mar kale ay maamulaan. Haddii ay dhibaatada sii socoto reinstallation waa xalka ugu fiican dhibaatada
2.Where iyo sida ay u soo bixi qaadi karo Spotify?
Waxaad ka heli kartaa Spotify la qaadi karo ee links soo socda:
Download iyo gashato sida gaarka u nidaamka aad.
Ka soo qaad in aad soo booqatid qof saaxiibkaa ah oo aad rabto in aad dhegaysato playlist on Spotify laakiin aan keenay telefoonka, kama saaxiibkaa ayaa Spotify lagu rakibay uu PC. Maxaad samayn kartaa?
Maxaa dhacaya haddii aad si toos ah codsi Spotify ee ay maamusho yaabaa inuu PC aan dhab ahaan u duuban, ka dibna waxaa ku rakibidda u music. Iyada oo la qaadan karo Spotify aad ku rakiban kartaa Mudanayaasha ku USB ama flash drive oo kaliya plugin marka aad u baahan tahay.
Talaabada 1: In la abuuro drive USB ah si fudud loo soo dajiyo ee Spotify files la qaadi karo oo ku saabsan in drive ka. Waxaad ka heli lahaa file soo socda qalab aad
C: Barnaamijka \_ Files \_ Spotify "Spotify.exe" iyo "Uninstall.exe"
Copy file kuwaas oo si Drive flash ah
Hadda furaysto ee drive ee nidaamka kale.
Fur buugga drive iyo ordi faylka Spotify.exe ka folder Spotify ka.
file ka .exe ordi lahaa rakibo ah qalabka kale iyo codsiga Spotify kor u furmay.
login in aad xisaabta oo wuxuu ku raaxaysan playlist ah.
Waxaa jira xadaynta badan dhaqankan, maxaa yeelay, ma aha sharci in ay wadaagaan codsigan aan xisaab sugay. Waa inaad haysataa rikoor iyo sii wadida tallaabooyin taxaddar ah ka hor inta aysan go'aan kasta ama la wadaago software ku network kasta.
Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Spotify la qaadi karo si loogu isticmaalo shakhsi kaliya oo wax kasta oo kale waa in la tixgeliyaa laga yaabaa in sharci-darrada ah iyo keeni karo dhibaato xaaladaha qaarkood. Tan iyo Spotify aan weli la bilaabay in qaar ka mid ah gobollada iyo wadaaga tan waa la tixgelin karaa sidii dambiyada ah.
Sida loo isticmaalo Spotify Search Function iyo Sida loo Raadi Playlists
Sida loo rakib Spotify ee Mac Windows
> Resource > Spotify > Talooyin ku qaadan karo Spotify